WordPress ngwa mgbakwunye: Banye nfe na Teleport
Have nwetụla mgbe ị chọrọ dezie a na peeji nke ma ọ bụ biputere na WordPress na-enwe nkụda mmụọ na-enweghị ike ịchọ na-ahụ post? Kedụ maka inwe ike ịgbakwunye ọkwa ọhụrụ dị mfe? Kedụ maka naanị ike ịchọta peeji nbanye n'ụzọ dị mfe? DK New Media'S egwu Mmepụta, Stephen Coley, akpatre nyere azịza ọ bụla WordPress ọrụ ga-achọ… Teleport.
Teleport bụ a ọjọọ jụụ obere menu gị onwe-kwadoro WordPress blog na Pop elu mgbe ị chọrọ ya nanị site na ịpị “w”. Keyboardzọ mkpirisi igodo ndị ọzọ gụnyere:
e - (Dezie) Dezie post / ibe ugbu a
d - (Dashboard) Ntugharị gaa Dashboard
s - (Ntọala) Redirects na Ntọala peeji nke
a - (Archive) Redirects to Posts / Pages / Custom Post Types
q - (Kwụsị) Dekọọ onye ọrụ ugbu a si / Redirects to Log In page
w - Mepee ma ọ bụ Mechie Teleporter
esc - Na-emechi Teleporter
Yabụ, ọ bụrụ n'ịhụ otu typo na ibe gị… pịa “w” nke “e” na voila sochiri! A na-akpọtụrụ gị ozugbo na nchịkọta akụkọ ebe ị nwere ike idozi post ahụ ma bipụta ngwa ngwa. Nke a bụ nkọwa vidiyo nke otu esi Teleport ọrụ:
Stephen nwere ụfọdụ atụmatụ ndị ọzọ na-abịa… mana nke a bụrịrị ngwa mgbakwunye dị ịtụnanya maka onye ọrụ WordPress ọ bụla!
Tags: Stephen Coleyteleportnbanye nbanyewordPress nbanye menuwordpress pluginWordPress mkpirisi
Nke a dị mma, m na-agbakwunye ya ozugbo !!